အမ်စတာဒမ်နှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ချိတ်ဆက်ခြင်း, Avignon, ဘရပ်ဆဲလ်, သေးငယ်သော, လိုင်ယွန်, Marseille, ပဲရစ်, နှင့်ရိုတာဒမ်, Eurostar ဖြစ်ကောင်းလူကြိုက်အများဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်ဖြစ်ပါသည် ဥရောပ၌မီးရထားဝန်ဆောင်မှု. လည်း, Getlink သီးခြားစီရထားလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်. သူတို့ဖြတ်သန်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့အကြား Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်း. တစ် network ပေါ်မှာ run နေ အရှိန်အလွန်မြန်သော လိုင်းများ, Eurostar ရထားတဆယ်ရှစ်ကား Class ကိုရေတွက် 373/1 ရထားနှင့်တဆယ်ခြောက်ကားအတန်းအစား 374 ရထား. သူတို့ကမှတက်မှာ run 186 တစ်နာရီမိုင် (300 တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ). ထို့အပွငျ, Eurostar အားလုံးလေကြောင်းလိုင်းများပေါင်းစပ်ထက်ပိုခရီးသည်သယ်ဆောင်. ဤသည် Eurostar ကလည်ပတ်သောလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်လွှမ်းမိုးရထားလမ်းအော်ပရေတာအောင်နေသည်.
အရှေ့ဘက်တွင်နိုင်ငံတကာ TGV Frankfurt ရန်သင့်အားယူမည် မြူးနစ်. အလားတူပင်, သင့်ရဲ့ တောင်ဘက်ခရီးသွားမှတ်တမ်း စပိန်အီတလီသို့မဟုတ်ဘာစီလိုနာအတွက်မီလန်သို့တိုက်ရိုက်သငျသညျယူပါလိမ့်မယ်. ခရီးသွားအမှားမလုပ်ပါနဲ့, TGV အရှိဆုံးအဆင်ပြေနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရထားတစျဦးဖွစျသညျ! ထို့အပွငျ, အဲဒါကသင့်ကိုအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးရင်ခုန်စရာခရီးစဉ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ် ပဲရစ်မြေထဲပင်လယ်၏ကမ်းခြေရန်. သို့မဟုတ်, အဆိုပါအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘော်ဒိုးမှ, လိုင်ယွန်နှင့် Marseille နှင့်ကမ္ဘာကျော်ကိန်း. ထိုကွောငျ့, သငျသညျပြင်သစ်ရောက်ရှိရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ရထားဆွစ်ဇာလန်, သငျသညျ TGV Lyria အားဖြင့် operated နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရထားစီးကလုပျနိုငျ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcross-border-trains-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml သင်သည် / es သို့ / fr သို့ / / de နှင့်အခြားဘာသာစကားများကိုပြောင်းနိုင်သည်.